Grate Bar, Rullaluistemadka & Dhalista, Biiyaha, Rack for qalabka qashinka lagu gubo. Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Grate Bar, Roller & Bearing, biiyaha, Rack for qalabka qashinka lagu gubo. Warshad
Qeexitaanka alaabta: BARNAAMIJKA BAR & Rullaluistemka Hawl geedi socodka ka mid ah shabaggeedii la gubayay waxaa qaboojiyay a dhexdhexaad ah oo halkaas ku qulqulaya. Shabaggu wuxuu leeyahay dhowr taargooyin godan oo ka samaysan bir bir ah. Saxan kasta wuxuu ku jiifaa saxanka hoose ee xiga. Biibiile isku xira ayaa loo habeeyay dhinac ka mid ah saxanka kasta oo tuubbo soo saarid ah ayaa loo habeeyay dhinaca kale ee saxan kasta oo dhexdhexaad ah oo socda. Taarikada shakhsiga ah waxaa iskudhaafaya tiro ka mid ah walxaha tuubada ee ka furma dhinaca sare ee taarikada. P ...
Sharaxaadda Badeecadda: Rack Waa geedi socod ay shabaggii gubitaanku ka dillaacay aalad dhexdhexaad ah oo halkaa ka socota. Shabaggu wuxuu leeyahay dhowr taargooyin godan oo ka samaysan bir bir ah. Saxan kasta wuxuu ku jiifaa saxanka hoose ee xiga. Biibiile isku xira ayaa loo habeeyay dhinac ka mid ah saxanka kasta oo tuubbo soo saarid ah ayaa loo habeeyay dhinaca kale ee saxan kasta oo dhexdhexaad ah oo socda. Taarikada shakhsiga ah waxaa iskudhaafaya tiro ka mid ah walxaha tuubada ee ka furma dhinaca sare ee taarikada. Hawada aasaasiga ah waa supp ...
Sharaxaadda Badeecada: Dhalista Nidaam ay ku duugantahay shabaggeedii gubitaanku uu dhexgalay dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo halkaa maraya. Shabaggu wuxuu leeyahay dhowr taargooyin godan oo ka samaysan bir bir ah. Saxan kasta wuxuu ku jiifaa saxanka hoose ee xiga. Biibiile isku xira ayaa loo habeeyay dhinac ka mid ah saxanka kasta oo tuubbo soo saarid ah ayaa loo habeeyay dhinaca kale ee saxan kasta oo dhexdhexaad ah oo socda. Taarikada shakhsiga ah waxaa iskudhaafaya tiro ka mid ah walxaha tuubada ee ka furma dhinaca sare ee taarikada. Hawada koowaad waa s ...
Sharaxaadda Badeecadda: Roller Nidaam ay ku duugantahay shabag la gubo oo ay dhexdhexaad ka noqoto socod dhex mara. Shabaggu wuxuu leeyahay dhowr taargooyin godan oo ka samaysan bir bir ah. Saxan kasta wuxuu ku jiifaa saxanka hoose ee xiga. Biibiile isku xira ayaa loo habeeyay dhinac ka mid ah saxanka kasta oo tuubbo soo saarid ah ayaa loo habeeyay dhinaca kale ee saxan kasta oo dhexdhexaad ah oo socda. Taarikada shakhsiga ah waxaa iskudhaafaya tiro ka mid ah walxaha tuubada ee ka furma dhinaca sare ee taarikada. Hawada aasaasiga ah waa su ...